Madaxa CIA-da Gina Haspel oo aqalka congress-ka kala hadli doonta dilkii Khashoggi… – Hagaag.com
Madaxa CIA-da Gina Haspel oo aqalka congress-ka kala hadli doonta dilkii Khashoggi…
Madaxa hay’adda sirdoonka ee CIA ayaa aqalka Congress-ka kala hadli doonta dilkii saxafiga Sacuudiga u dhashay ee Jamal Khashoggi, sida ay ku warramayso warbaahinta Maraykanka.
Gina ayaa ka baaqatay kulankii toddobaadkii hore xogta lagula wadaagayay wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka gaashaandhigga.
Khashoggi ayaa lagu dilay qunsuliyadda Sacuudigu uu ku leeyahay magaalada Istanbul bishii Oktoobar.
Dowladda Sacuudiga ayaa dacwado ku soo oogtay 11 ruux, balse waxay diiday in amiirku uu ku lug lahaa dilka.
Warbaahinta Maraykanka ayaa sheegaysa in CIA ay hayso caddaymo muujinaya fariimo ay is waydaarsadeen amiirka iyo Sacuud al Qahtani, kaas oo lagu eedeeyay in uu dusha kala socday dilka.
Wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo wasiirka gaashaandhigga James Mattis ayaa senetarrada u sheegay toddobaadkii hore in aysan jirin caddaymo toos ah oo muujinaya in amiirka dhaxalka leh uu ku lug leeyahay dilka.
Tobannaan sano ayuu aad ugu dhawaa qoyska boqortooyada wuxuuna lataliye u noqday dowladda.
Isha Warka : BBC